Ngokwezwi nezwi igama elithi kwisi asebuya English - «ukubuyela». Kuze kube manje, lo mqondo kabanzi wangena isichazamazwi amantombazane Russian futhi ngokuvamile sisetshenziswa njengoba i-slang noma ezemidlalo izifundo. Ngakho, kungashiwo mayelana asebuya ngezinkani, ukuthi le ncazelo ecacile njengetintfo letisetjentisiwe imvelo intsha yanamuhla.
Umqondo "asebuya" kwezemidlalo
Empeleni, igama elithi "asebuya" isetshenziswa amaqembu ezemidlalo, lapho omunye amakilabhu ngokuhamba umdlalo ngempela kude ngemuva abaphikisi ngesikhathi esifanayo emhlanganweni nguye onqobile sokugcina. Iphawula ngezimbangela imidlalo enjalo, wayevame ukusebenzisa iimphawulo "asebuya Amazing" noma "self-akunika olumangazayo, ekwazi ukulwa." Imihlangano enjalo lapho ngendlela engenathemba ithimba wokulahlekelwa ekugcineni losusa ukunqoba, ukunikeza abadlali isimo sengqondo esiqondile, futhi lezi imidlalo ungalunga ngaphansi kwesimo kuyanda.
Esebenzisa igama elithi "asebuya" ekuphileni kwansuku zonke
Luthini olwakho "asebuya" ekuphileni kwansuku zonke, sizwisise ezingxoxweni of intsha yanamuhla. Basebenzisa le ncazelo lapho ufuna ukusho mayelana nokubuya ngothile noma ngokuthile. Kuyaphawuleka ukuthi ngo-jikelele, amagama lesiNgisi namazwi lizimelele ku isichazamazwi amantombazane futhi babe eside ukusetshenziswa.
Kuhle football asebuya emlandweni wamuva
Fanisa ephakathi kweJalimane Sweden ku Umjikelezo we 2014 World Cup, owawusedolobheni Okthoba 16, 2012, futhi yaphela draw ne score 4: 4, equkethwe amazing asebuya Swedish. AmaJalimane sizole futhi kulinganiswa babehola amagoli amane ngesikhathi halftime wacabangela ngaphandle kokuhlupheka kakhulu ukuletha ke ukuthi anqobe. AbaseSweden balwa, esikhundleni salokho, wazama ukubuyisela emuva inkambo umhlangano futhi lokushaya okungenani umgomo ukuvelela. Ngenxa yalokho, umgomo sokugcina amaphuzu umisiwe isikhathi imizuzu engu-93, futhi Sweden izuzwe draw.
Final ohlonishwa kakhulu football umncintiswano - Champions League - ngo-2005 waba simo ezikhexisayo. Comeback ebholeni ezingeni eliphezulu enjalo - into ezingavamile. Khona-ke Italian "Milan" in the game ne-English "Liverpool", kubonakala, wenza isiqalo esihle ukuwina emva kuqala imizuzu engamashumi amane nanhlanu, igcinwe amaphuzu amagoli amathathu, kodwa British ngalolo futhi kubhekwa ngukhokho football, ngoba ngizama ukusebenzisa konke ukunqoba . "Liverpool" amaphuzu kanye okuholela isigwebo kudutshulwana iwina indondo.
Ngo-2004, kukhona club ezimbili masterovityh "Manchester City" futhi "Tottenham" kowamanqamu FA Cup. Lo mdlalo uye waba esivulekile imigomo futhi equkethwe ophawulekayo ubuhle inani lazo. Kuyini ibhola kubalandeli English - akudingeki ukuthi they are the abasekeli oshisekayo kakhulu emhlabeni. Ngalolo suku, abalandeli e Manchester ngename kwaze kwaba sekuseni, njengoba club yabo wathatha umdlalo, ukulahlekelwa e amagoli amathathu ngesikhathi somhlangano.
Emuva ngo-2001 i-London "Tottenham" futhi zahlala emzini eManchester yachitha okufanayo FA Cup nge sendawo "Manchester United". Masterovitaya iqembu ekhaya ngaphambi umdlalo futhi Wayengacabangi ukuthi bayoba yekela imigomo emithathu ngesikhathi sekhefu. umphathi Esezidonsile Mnumzane Aleks Fergyusson engxenyeni yokuqala lomhlangano ezikhishwe Solskjaer ngandlela-thile ukushintsha inkambo umhlangano, kodwa amaqembu waya ikhefu ne score 0: 3 esivuna izivakashi. Ngesikhathi kusamisiwe okwesikhashana, Ferguson namanje wathola amagama afanele, kanye maqembu amabili wawusuka okusheshayo Beckham nge ukusiza kwakhe kwaholela eqinisweni ukuthi kwakukhona asebuya Amazing. Yini eyenzekayo zezitsha "Old Trafford" - akunakwenzeka ukuba adlulisele ngamagama. Ekugcineni "United" labetibambile amahle ngesiwombe sesibili futhi kwakufanele won amaphuzu 5: 3.
Uma kucatshangelwa imininingwane yalolu umdlalo ice hockey, lapho ikhanda kuza abangaphezu kuka-football, kaningi kwenzeka inani lazo. Uyini ukubuya umdlalo we-hockey team ngemva imigomo eziningana uphuthelwe, abalandeli wazi ngokuzibonela. Kuwo wonke isizini ye National Hockey League e-United States noma Continental Hockey League esimweni sethu, asebuya ngezinkani ezinjalo ngaphezu kwesikhathi esisodwa.
Kanjani ukuze athathe isampula sezinyawo futhi ukuthi ukuqeqeshwa kuyadingeka?